घर » रक्षा » The Avengers vs. Gamma Monsters The Avengers: Earth's Mightiest Heroes
खेल जानकारी: The Avengers vs. Gamma Monsters The Avengers: Earth's Mightiest Heroes
नियन्त्रण: use mouse to play The Avengers vs. Gamma Monsters The Avengers: Earth's Mightiest Heroes Game.
खेल्नु: 25,568 ट्याग: यो Avengers, The Avengers games, Avengers खेल, Gamma, राक्षस खेल, Avengers, Heroes games
avengers थोर चिसो विशाल उन्माद
फ्रस्ट दिग्गज को एक crawling सेना विरुद्ध थोर रूपमा युद्धमा के! यो क्लासिक ईटा ब्रेकर शैली मिनी-खेल मा शत्रु को सामने लाइनहरु विरुद्ध आफ्नो हथौडा सुरु द्वारा Asgard सुरक्षित।
न्याय को avengers कप्तान अमेरिका ढाल
यो Avengers कप्तान अमेरिका शील्ड को न्याय।
कप्तान अमेरिका लाल खोपडी पराजित गर्न मिशन मा छ। तपाईं अभियान मोड वा बचाउको मोडमा खेल्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ साथै बनाउन अन्य निर्णायक विकल्प छन्। उहाँले आफ्नो विशेष abilitie प्रयोग गर्न छ
तपाईं बनाम दानव
खुबै, Bash र ड्यास हतियार एक्स सुविधा मार्फत वोल्भेरिन र Asgardian योद्धाहरू लड्न।
दानव रक्षा बाहिर
दानव त्यहाँ पृथ्वी नष्ट गर्न चाहने धेरै छन् जहाँ प्रागैतिहासिक गाउँ, मा गुमाए। कृपया उसलाई, तिनीहरूलाई पत्थर फेंक प्रत्येक स्तर उत्तीर्ण गरे पछि, दानव शक्ति वृद्धि गर्न यी वस्तुहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ।
को avengers नायक फुटबल
विश्व कप नायक बारेमा उत्साहित Avengers क्षेत्र प्रविष्ट गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई बीच एक फुटबल लिग बनाउन निर्णय गरे। आफ्नो मनपर्ने नायक चयन र गर्दा आफ्नो क्लोन आफ्नो विरोधीको विरुद्ध लड्न बाहिर आउन सबैभन्दा लक्ष्य स्कोरिङ खेल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
को avengers फिर्ती
यो Avengers एक अविश्वसनीय चुनौती सामना गर्नेछ, त्यसैले सामने लाइन मा जाने दानव, कप्तान अमेरिका वा फलाम मानिस बीच छनौट तिनीहरूलाई मदत देखिन्छ। आफ्नो काम सुविधा आफ्नो शक्ति प्रयोग
kungfu पांडा: कुंग फू hustles
पो यो खेल मा चुनौतीहरू पार गर्न मद्दत गर्छ। आफ्नो मानसिक तीर देखाएको माउस बटन पकड गर्दा दिशा मा आफ्नो माउस सार्नुहोस्। एकपटक तपाईंले माउस सरेको छ, बटन जारी।
कुंग फू पांडा: बेसी सुरक्षा
प्ले कङ फु पान्डा: घाटी सुरक्षित: उत्कृष्ट खचाखच भरिएको साहसिक मा आफ्नो चुनौती छान्नुहोस्।
सबै निक नायक बहु
के यो एक सुपर मिनी पहेली हिरो हुन लिन्छ के छ? केही orbs दुर्घटनामा र पत्ता! सुपर मिनी पहेली हीरो मल्टिप्लेयर तपाईं यसलाई एक सुपर मिनी पहेली हिरो हुन लिन्छ के छ? केही orbs दुर्घटनामा र पत्ता!
दानव सुपर बाइक सवारी
सहायता दानव झर्ने बिना अवरोध भन्दा सुपरबाइक र जम्प ड्राइभिङ। नियन्त्रणमा रहनु र बाँण कुञ्जी प्रयोग गरी उच्चतम स्तर मारा।
थोर-को avengers संसारमा सुरक्षित
शत्रु मारा सार्न र ठाउँ ढिक्का world.Use तीर कुञ्जीहरू बचत गर्न थोर सहयोग गर्नुहोस्।
थोर को गर्जन ल्याउन
थोर साँच्चै रिसाउनुहुन्छ र गर्जन ल्याउन तयार छ! रमाइलो गर!